Android Archives - Page3of6- Myanmar End User
By Win Thet Oo July 22, 2019
Viber ဆိုတာ Viber ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ Viber ဟာ Free messenger တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Viber ကနေ တဆင့် နိုင်ငံတကာကို တိုက်ရိုက် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးစေခဲ့ပါတယ်။ Viber ကနေတဆင့် နိုင်ငံတကာကို ...
Facebook ဆိုတာကတော့ လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ… ဒီတော့ တွေတွေထူးထူး ရေးစရာလည်း သိမရှိတော့ပါဘူး… ဒီမှာ Facebook ရဲ့ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အမြဲ Update လုပ်ပေးသွားမှာပါ… Download လုပ်ရတာ အဆင်မပြေရင် Comment ကနေ ပြန်လည် ပြောပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်… [Unicode] Facebook ဆိုတာကတော့ လူတိုငျးနဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား ဖွဈမှာပါ… ဒီတော့ တှတှေထေူးထူး ရေးစရာလညျး ...
#Google Photos Application နဲ့ ပုံလေးတွေကို Cloud ထဲ သိမ်းကြမယ်# အခုလို နည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ ဖုန်းနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြသိမ်းကြတာ အထူးဆန်းတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး… ထူးခြားပြီး ဆန်းသွားတာက ဖုန်းပျက်တာဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းထဲထည့်ထားတဲ့ sd card က ဖြစ်ဖြစ် ပျက်သွားလို့ ...
Wireless Display အတွက် HDMI Wireless Display Dongle
Zawgyi Version နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကလည်း ပို၍လွယ်ကူလာခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေထဲကမှ Wireless Display ချိတ်ဆက်မှု ပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အခု မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Dongle ကတော့ China made ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းမှာ ပါဝင်တာတွေကတော့ Display device ...
By Myanmar End User August 15, 2017 0
Xiaomi အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Zawgyi Version Mi ကိုဝယ်တော့မှာလား ? ဝယ်လာလို့ စသုံးဖြစ်ပြီလား ? ဝယ်မယ့်သူကိုပြန်ရှင်းပြဖို့လား ? Mi and Redmi ဖုန်းမှာ အဓိက Model နှစ်မျိုးက Mi နဲ့ Redmi ပါ။ Mi ကတော့ ...
By Myanmar End User June 20, 2017 0
Zawgyi Version ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့မှာ KBZ Bank ကနေ ၎င်းတို့ရဲ့ Mobile application ကို 2.1 သို့ Update ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ Update မှာ User interface တွေ ပြောင်းသွားတာကြောင့် သုံးရတာ ရှင်းသွားပြီး Cardless ...
Zawgyi Version NetEase က နောက်ဆုံး ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Crusaders of Light ဆိုတဲ့ MMO (Massively Multiplayer Online) game နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ NetEase ဆိုတာ ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး PC game ဖြစ်တဲ့ ...
By Myanmar End User April 28, 2017 1
October 11, 2017 157620 views
October 12, 2017 120274 views
February 24, 2017 72701 views
November 16, 2016 49640 views